3D obodo - Geofumadas
Oge a n’afọ na-arụsi ọrụ ike n’ịwepụta ụdị ọhụụ ọhụrụ na azịza maka nsogbu gburugburu ụwa. N'ebe a, m na-achikota ma ọ dịkarịa ala 10 nke dọọrọ uche m n'ụbọchị ikpeazụ, awa na nkeji. ERDAS, na-enye Japan free satellite image mmelite Bentley Navigator, aha ya bụ n'etiti Top named
AutoCAD 2012 Bentley Systems obodo 3D gvSIG oS
Usoro nke oru na AutoCAD Civil 3D 2011
AutoCAD Civil 3D 2011 na-egosi na ọ bụ ngwa ọrụ bara uru maka ọrụ injinịa metụtara mmepe nke mmepe ụlọ, okporo ụzọ, nyocha, na netwọkụ ọkpọkọ. Mgbe mgbanwe a na-eme na ngwanrọ a, na mbipute 2011 anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ntozu okè nke ndị ọrụ iji mee ihe na interface ọhụrụ mgbe obere ...
Facebook: vidiyo maka ndị nyocha
Site na ntinye Facebook na-aghọ ngwa ọrụ nkịtị maka ebumnuche azụmaahịa na agụmakwụkwọ. Dika obu "ndi mmadu nke ndi mmadu", ulo oru eleghachila aka na ndi mmadu a jikọtara ọnụ, nke nyela ya uru karia netwọkụ mmekọrịta. Otu n'ime njirimara kachasị mma bụ ...
obodo 3D Google Earth
Nzọụkwụ dị elu site na Polylines (Nzọụkwụ 2)
Na post gara aga anyị nyere anyị onyonyo nke nwere contours, ugbu a anyị chọrọ ịtụgharị ha na Civil 3D contours. Detuo akụkụ ahụ Maka nke a, enwere mmemme nke ga - emezi usoro a, dịka AutoDesk Raster Design, nke ya na Descartes na Bentley ma ọ bụ ArcScan dị na ESRI. Na nke a, aga m eme ya n'ụkwụ, ...
AutoDesk Bentley Systems obodo 3D ESRI Google Earth
Nzọụkwụ dị elu site na Polylines (Nzọụkwụ 1)
Tupu anyị ahụ otu esi emepụta akara elekere na-amalite site na netwọkụ akara nke eburu n'ọhịa. Ugbu a, anyị ga-ahụ otu esi eme ya, site na akụkụ ndị dị na maapụ nyocha. Dị ka anyị mere n'okporo ụzọ ahụ, anyị ga-agbaji ya n'ime usoro, ka ọkwa ahụ wee ghara ịpụta karịa ogologo oge ...
Ihe karịrị 60 Autolisp na-eme maka AutoCAD
Lisp maka mgbanwe na arụmọrụ 1. Gbanwee ụkwụ na mita na nke ọzọ Nke a na-eme na Autolisp, na-enye anyị ohere ịgbanwe uru abanye site na ụkwụ ruo mita na otu aka ahụ, nsonaazụ ya gosipụtara na akara iwu. N'ebe a, anyị na-ejikwa ọrụ CVunit, ọrụ lisp a na-enweta ụkpụrụ ntụgharị site na faịlụ acad.unt ...
AutoDesk obodo 3D dwg